Soomaaliya oo noqotay dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo noqotay dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida
January 25, 2017 Shafei Osman Yusuf Somalia 0
Soomaaliya oo noqotay dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida. [Sawirka: Archive]
Berlin-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa noqotay dalka ugu musuq-maasuqa badan caalamka, sida ay muujinayso warbixin ay soo saartay haayada Transparency International maanta oo Arbaco ah.
Transparency ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ka dhigtay dalka kuyaala Geeska Afrika dalka kowaad ee ugu musuqa badan ilaa iyo 176 wadan oo tusaale loo qaatay.
Dalka Koonfurta Sudaan ayaa galay kaalinta labaad, sida lagu sheegay warbixinta Transparency International.
Tusmaynta musuqmaausqa,taasoo ay daabacday haayada caalamiga ee Transparency International oo fadhigeedu yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa ku qiyaastay musuqa, laaluushka, xadida iyo lacagta canshuurta ah ee lala dhuunto, ee dalalka soo koraya, kharash gaaraya $1.26 trillion sanad walba.
Soomaaliya ayaan lahayn dowladda dhexe oo shaqaysa tan iyo markii awooda laga tuuray hoggaamiyihii mudada dheer talinayay Maxamed Siyaad Bare sanadkii 1991-dii. Dalka kuyaala Geeska Afrika ayaa bishii lasoo dhaafay qabtay doorasho baarlamaan, balse hanaanka doorashada ayaaa waxaa hareeyay qalalaase, musuqmaasuq, cod gadasho iyo muran qabiil.
January 29, 2019 Soomaaliya weli waa dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida